ခေတ္တခဏသေဆုံးပြီး အအေးဒဏ်ကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့ မြောက်အမေရိက Wood Frog ဖား - Khit THit Media
ခေတ္တခဏသေဆုံးပြီး အအေးဒဏ်ကိုရှောင်ကျဉ်တဲ့ မြောက်အမေရိက Wood Frog ဖား
အလွန်အေးတဲ့အရပ်တွေမှာ နေထိုင်ကျတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေဟာ ဆောင်းတွင်းဆို အအေးဒဏ်ကိုရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် နွေးထွေးတဲ့အရပ်ဒေသတွေဆီ ပြောင်းရွှေ့ကြမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွင်းနက်နက်တွေတူးပြီး နွေဦးမတိုင်မီအထိ အိပ်စက်ချင်လဲ အိပ်စက်ကြမယ် စသဖြင့် ဗျူဟာအစုံပြသကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြောက်အမေရိက က Wood Frog ဆိုတဲ့ ဖားတွေကတော့ အပူချိန်ရေခဲမှတ်အောက် အနှုတ် ၆ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရက်စ် ထိရောက်နေနိုင်တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ အအေးဒဏ်ကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ ဘာမှ အထွေအထူး လုပ်မနေပဲ နွေဦးကာလရောက်တဲ့ထိတိုင်အောင် ရက်သီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ ခေတ္တခဏ သေဆုံးလိုက်ကြပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ အသက်ရှုမူ၊ နှလုံးခုန်မူတွေ တဖြည်းဖြည်း ရပ်ဆိုင်းသွားပါပြီ၊ ခန္ဓာကိုယ်လဲ တောင့်တင်းနေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ ဆဲလ်တွေအကြားမှာ ရှိတဲ့ ပျော်ရည်တွေ ရဲ့ ၆၅ရာခိုင်နှုန်းဟာ တဖြည်းဖြည်းချင်း ရေခဲတွေဖြစ်သွားပါပြီ။
ဒါပေမဲ့ဒါဟာ ခေတ္တခဏ သေခြင်းတရားကို မြည်းစမ်းနေရုံသာဖြစ်ပြီး နွေဦးကာလအပူချိန် ပြန်လည်မြင့်တက်လာချိန်မှာတော့ သူတို့တွေ ပြန်လည်အသက်ဝင် လှုပ်ရှားလာ ပါတော့တယ်။
အေးခဲနေစဉ်အတွင်း သူတို့ရဲ့ ဆဲလ်တွေ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံး ကျုံ့ဝင်မူ (Hypertonic) ကြောင့် ပျက်စီးမူ မဖြစ်ပွါးရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ဒီလိုပါ
ဒါပေမဲ့ မြောက်အမေရိက က Wood Frog ဆိုတဲ့ ဖားတွေကတော့ အပူချိန်ရေခဲမှတ်အောက် အနှုတ် ၆ ဒီဂရီ ဆဲလ်စီးရက်စ် ထိရောက်နေနိုင်တဲ့ ကာလအတွင်းမှာ အအေးဒဏ်ကို ရှောင်ကျဉ်ဖို့ ဘာမှ အထွေအထူး လုပ်မနေပဲ နွေဦးကာလရောက်တဲ့ထိတိုင်အောင် ရက်သီတင်းပတ်ပေါင်းများစွာ ခေတ္တခဏသေဆုံးလိုက်ကြပါတယ်။
အေးခဲနေစဉ်အတွင်း သူတို့ရဲ့ ဆဲလ်တွေ ရေဓာတ်ဆုံးရှုံး ကျုံ့ဝင်မူ (Hypertonic) ကြောင့် ပျက်စီးမူ မဖြစ်ပွါးရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက ဒီလိုပါ။
ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက ပျော်ရည်တွေဟာ ရေတွေ၊ သကြားတွေ ၊ ဆားတွေအပါအဝင် များစွာသော အရာတွေ စုစည်း ပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ပျော်ရည်တွေရဲ့ ၆၅ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ရေခဲတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်က ပျော်ရည်တွေထဲက ရေတွေသီးသန့်သာ အဓိက စုစည်းခဲသွားတာဖြစ်ပြီး ကျန်တဲ့ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ ရေခဲထဲ မပါဝင်တော့ပဲ ရေခဲရဲ့အပြင်ကို အများအပြား စွန့်ပစ်ခံရပါတော့တယ်။
ဆိုတော့ ကျန်ရှိသော ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ပျော်ရည် ၃၅ရာခိုင်နှုန်းမှာ စွန့်ပစ်ခံ ပျော်ဝင်ပစ္စည်းတွေကြောင့် ပျော်ဝင်ပစ္စည်းပမာဏ ပိုမိုများလာတဲ့အတွက် ဒီပျော်ရည် ၃၅ရာခိုင်နှုန်းဟာ ပိုပြီး ပြင်းအား (Concentration) ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင် ဆဲလ်တွေကို ကျုံ့ဝင်ပျက်ဆီးမူ(Hypertonic)ဖြစ်ပွါး စေပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြင်းအားကောင်းတဲ့ ပျော်ရည်တွေဟာ ခုအချိန်မှာ ဆဲလ်တွေကို ဝန်းရံထားပါပြီ။ ပျော်ရည် ပြင်းအားမတူတဲ့ အရည်၂ခုကို အလွှာပါး (Membrane) လေးခြားပြီး ထားရှိမယ်ဆိုရင် ပျော်ရည် ပြင်းအားနည်းတဲ့ ဘက်က ရေတွေဟာ ပျော်ရည်ပြင်းအား မြင့်တဲ့ ဘက်ဆီ အလွှာပါးလေးကို ဖြတ်ကူးလာတဲ့ သဘာဝရှိပါတယ်။ ဒါကို Osmosis လို့ ခေါ်ပါတယ်။
ခုအချိန်မှာလဲ ဆဲလ်ရဲ့အပြင်ဘက် အရည်တွေရဲ့ ပျော်ရည်တွေရဲ့ ပြင်းအားဟာ ဆဲလ်အတွင်းက အရည်တွေထက် ပိုပြီး ပြင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဆဲလ်အတွင်း က ရေတွေဟာ အပြင်ဘက်ကို ကူးလာပြီး ဆဲလ်အတွင်းရေ ပြတ်လတ် ကျုံ့ဝင်ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဒီဖားတွေမှာတော့ အံ့ဖွယ် ဒီဇိုင်း ပါဝင်နေပါတယ်။
ဒီဖားတွေရဲ့ အသည်းဟာ ယခုအချိန်မှာ ဆဲလ်တွေအတွင်းသို့ ဂလူးကို့စ် သကြားတွေ ရောက်အောင် ပို့လိုက်ကြပါတယ်။
ဒီလို ဆဲလ်တွေအတွင်း သကြားတွေ ဝင်ရောက်သွားစေရန် ပို့လိုက်တာ ဘာအတွက်လဲဆိုရင် နံပါတ်တစ် အချက်က ဆဲလ်အတွင်းရေတွေဟာ သကြားတွေနဲ့ ရောသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့ရဲ့ ရေခဲမှတ်ဟာ ပိုပြီးနိမ့်ကျသွားပါတယ်။
ဆိုလိုတာက နဂိုရေချည်းသပ်သပ်ထက်စာရင် သကြားရည်က ပိုပြီး ခဲဖို့ မလွယ်ဘူးလေ။ ဆိုတော့ ဆဲလ်ထဲက ရေတွေ မခဲတော့ဘူးပေါ့ ။
နံပါတ်နှစ်အချက်ကတော့ အခုဆိုရင် ဆဲလ်ထဲက ရေတွေထဲမှာလဲ ပျော်ဝင်ပစ္စည်း သကြားတွေရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပျော်ရည်ပြင်းအားဟာ မြင့်မားသွားပြီ
ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆဲလ်အပြင်ဘက်မှာ ဝန်းရံနေတဲ့ ပျော်ရည်တွေဆီ ရေတွေ ကူးသွားစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ဆိုတော့ ဆဲလ်တွေဟာ ရေပြတ်တောက် ကျုံ့ဝင်ပျက်စီးမှု မဖြစ်ပွါးတော့ပါဘူး။
( Frogs: A Chorus of Colors , By John L. Behler, Deborah A. Behler and Clyde Peeling , Pg. 58 – 59 )
( Animal Cold Hardiness9– Carleton University, By Kenneth B. Storey and Janet M. Storey , Pg. 41-42 )
( A Glimpse of immortality : Some frogs survive regular freezing. If we learn the frog ‘s secret, there isachance that we can apply the same technique to human tissues, By Stephen Yong , New Scientist , 15 Sep 1988 , Pg. 45 )
CNN Heroes (CNN မှ ရွေးချယ်သော သူရဲကောင်းများ)
စုန်းမတွေလို့ယူဆရတဲ့ရုပ်ကြွင်းတွေနဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း သဂြိုလ်မှုများ
Living Together နှင့် တား​ဆေး အန္တရာယ်
Previous Article ဗုဒ္ဓစာ​ပေများ​ရေးသားသူ ပညာတက်ဘုန်းကြီးကိုပစ်မှားခဲ့သူများ
Next Article CNN Heroes (CNN မှ ရွေးချယ်သော သူရဲကောင်းများ)